3 More Kenya Airlines kwụsịrị Tanzania
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » 3 More Kenya Airlines kwụsịrị Tanzania
Airlines • Na-agbasa News Travel • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Linesgbọ elu Kenya atọ ọzọ akpọchiri
Atọ ndị ọzọ Ndị ụgbọ elu Kenya kwụsịrị na Tanzania dịka o doro anya na mba abụọ ahụ na-achịkwa njikwa COVID-19.
Ndị ọrụ ụgbọelu na Tanzania na Tuesday, August 25, 2020, nyere iwu mgbochi megide AirKenya Express, Fly540, na Safarilink Aviation, ha niile si Nairobi.
Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu na Tanzania (TCAA) bụ Hamza Johari kwupụtara na ya amachiela ndị ụgbọ elu Kenya na ngwụcha izu a.
Maazị Johari kwuru, "Ihe mgbakwasị ụkwụ na mkpebi ahụ imebi nkwado anyị maka ụgbọ elu Kenya atọ bụ esemokwu na-aga n'ihu n'etiti mba abụọ ahụ."
Na August 1, 2020, TCAA amachibidoro ụgbọ elu Kenya, Kenya Airways (KQ), ịbanye na Tanzania, mkpebi nke onye nchịkwa kwuru na ọ bụ na mgbagha mgbe Kenya wepụrụ Tanzania na ndepụta nke mba ndị ga-ahụ ka ndị njem na-erughị ala mgbochi ahụike maka ụjọ Ọrịa COVID-19.
Kemgbe ahụ, Kenya agbasaa ndepụta ahụ na mba 100 ndị enyere ndị njem na-abata ịbanye na Kenya na-enweghị mgbochi ụbọchị 14.
Tanzania ka na-efu na ndepụta ahụ.
Tupu mmachibido iwu nke Tuesday, AirKenya Express na Fly540 nke ọ bụla na-efe Kilimanjaro na Zanzibar ugboro asaa n'izu. Njem ụgbọ elu Safarilink nwere ọtụtụ njem, na-arụ ọrụ ugboro asaa na ụzọ ọ bụla nke ụzọ Kilimanjaro na Zanzibar kwa izu.
Companieslọ ọrụ ndị a emegharịghi maka mmachibido iwu a ka ọnwa Ọgọstụ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na isii, n’afọ 26. Kenya Airways n’aka nke ya kwuru na nso nso a na e lebara okwu ahụ anya n’etiti mba abụọ ahụ tupu ọ mara mgbe ọ ga-amalite njem ụgbọ elu.
Kenya Airways, nke na-arụ ọrụ na mpaghara mpaghara ya site na Jomo Kenyatta International Airport na Nairobi, nwere ikike iji ụgbọ elu ugboro 14 gaa Dar es Salaam kwa izu, ugboro atọ gaa Kilimanjaro, na ugboro abụọ na Zanzibar, ọkachasị ndị njem na ndị njem azụmahịa n'etiti abụọ aga.
Maazị Johari kwuru na a gaghị ewelite ndị ụgbọ elu Kenya kpọchiri akpọchi na mmachibido iwu n'ụgbọ elu anọ belụsọ na ndị njem ụgbọelu si na Tanzania ga-esonye na ndepụta nke mba ndị njem ha anaghị agụpụ iche. "E kwere ka ụfọdụ mba banye Kenya na-enweghị otu ọnọdụ n'agbanyeghị na ha nwere oke nnukwu ọrịa COVID-19," Johari kwuru.
Maazị Johari kwuru na ọ bụ ihe ijuanya na Tanzania, bụ nke o kwuru na ọ dị nchebe pụọ na ọrịa a, emeghị mbelata ndepụta ndepụta doro anya nke Kenya.
Dị ka Johari si kwuo, a gaghị ewepụ mmachibido iwu ụgbọ elu ụgbọ elu anọ nke Kenya ọ gwụla ma e nyere ndị njem ụgbọelu si Tanzania otu ọgwụgwọ dị ka ndị dị na ndepụta ahụ.
Linesgbọ elu Kenya a machibidoro iwu na-enye ndị njem nleta na-aga Northern Tanzania ọrụ, ọkachasị ndị na-ejikọ njem njem ha site na Nairobi.